Uncategorized – Myanmar Broadband Telecom Co.,Ltd.
Myanmar Broadband Telecom Uncategorized May 26, 2021
Myanmar Broadband Telecom Uncategorized January 7, 2021
ဘေလ်ပေးဆောင်ဆာင်ရန်အတွက် AYA Bank Account , CB Bank Account , Wave Money Account တို့ကိုအသုံးပြုပြီး ဘေလ်ပေးဆောင်လို့ရတဲ့အပြင် KBZ ရဲ့ Quick Pay Accountဖြင့် ဘေလ်ပေးဆောင်တယ်ဆိုရင် 5% Discount လည်းရရှိနိုင်အုံးမှာ ဆိုတော့
Users အမျိုးတို့ရေ Covid လည်း ကာကွယ်ရင်း Discountတွေရယူပြီး MBT ရဲ့အင်တာနက်လိုင်းလေးသုံး Stay at home, Work From Homeလိုက်ပါနော်
Ygn Billing Dep Hotline (Office Day) -09407365382
Customer Service Hotline(8:00Am To 11:00Pm) -013684488
အိမ်မှာနေပါ လက်ဆေးပါ Stay at home မှာ MBT Internet ကို အသုံးပြုပြီး Stay Safeဖြစ်အောင် နေပါ။
Covid 19 ကာလမှာ အပန်းဖြေစရာတွေကို Onlineပေါ်ကနေကြည့်ရှုမယ် Online Learning၊ Work From Homeတွေလုပ်ဖို့ကတော့ လိုင်းကောင်းကောင်းFiber Internetသုံးဆွဲချင်သူများကို MBT မြန်နှုန်းမြင့် Fiber Internetလေးက အဆင်သင့်ပါ ခင်ဗျာ….
လစဉ်ကြေး 24900ကျပ်သာ ပေးရမည့် 20Mbps Plan
တန်လည်းတန် မြန်လည်းမြန် MBT ရဲ့ ဒေတာအကန့်အသတ်မဲ့ တပ်ဆင်ကြေးအခမဲ့
Stay home မှာ MBT 20Mbps plan လေးနဲ့ လန်းနေလိုက်ပါ။
တပ်ဆင်လိုသောမိဘပြည်သူများ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များအလိုက် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးခွဲများသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ဖုန်နံပတ်က – 09989881777
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် ၂၆၂၊ အခန်းအမှတ် ၅၊ သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09981438167
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် ၁၀၊ ဒုတိယထပ့်၊ အနော်ရတာအိမ်ယာ၊ လှည်းတန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09978143666
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် ၁၃၊ အခန်းအမှတ် ၁၀၁၊ ပင်လုံလမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ယာအပိုင်းလေး၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09978142666
လိပ်စာက – အိမ်အမှတ် ထ/၁၆၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ် ၇ ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09750047345
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် ၅၀၊ အခန်းအမှတ် ၃(ဘီ)၊ စည်ပင်လမ်း၊ သစ်ဆိုင်ကွေ့မှတ်တိုင်အနီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09886274665
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် G (ဂျီ )၊ အခန်အမှတ် ၃၀၂(G)၊ ဗဟိုလမ်း၊ မနော်ဟရီအိမ်ယာ၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09978408666
လိပ်စာက – အခန်းအမှတ် ၇၊ ဒုတိယထပ်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09985145758
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် ၂၊ အခန်းအမှတ် ၄၊ ဒညင်းကုန်းအိမ်ယာ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09966258333
လိပ်စာက – အိမ်အမှတ် ၁၃၀၈(အေ)၊ ပုလဲလမ်း၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09940893394
လိပ်စာက – FMI ဓမ္မာရုံ၊ အထက်ပဒေသာပင်လမ်း၊ FMI အိမ်ယာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09978287111
လိပ်စာက – အမှတ် ၃၁၂၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားအနီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09978284111
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် ၁၊ အခန်းအမှတ် ၂၀၈၊ မြိုင်ဟေဝန်အိမ်ယာ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09988688653
လိပ်စာက – တိုက်အမှတ် ၇၊ အခန်းအမှတ် ၁၀၁၊ တတ်လမ်းအိပ့်ယာ၊ ရတနာလမ်း၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ်က – 09952255138
လိပ်စာက – ခရေပင်လမ်း၊ ၂(က)ရပ်ကွယ်၊ သပြေလမ်းသွယ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။